MV တဈပုဒျရိုကျဖို့အတှကျ ဆံပငျအရှညျတှကေို စှနျ့လှတျပွီး ကတုံးတုံးခဲ့တဲ့ မေ – Askstyle
MV တဈပုဒျရိုကျဖို့အတှကျ ဆံပငျအရှညျတှကေို စှနျ့လှတျပွီး ကတုံးတုံးခဲ့တဲ့ မေ
အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ် မလေး မေ ကို ပရိသတ်တွေ သိလောက်မယ် ထင်ပါတယ်။ သူမက အဆိုတော် တစ်ဦးအနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်လာသူ ဖြစ်ပြီး မော်ဒယ်လ် တစ်သီးအဖြစ်ရပ်တည်လာပြီး သူမသရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားများစွာလည်း ရှိပါတယ်။ လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သူမ က ခုဆိုရင် ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဆိုလည်းမမှားပါဘူး ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေး ရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် MV တစ်ပုဒ်ရိုက်ဖို့အတွက် ဆံပင်အရှည်တွေကို စွန့်လွတ်ပြီး ကတုံးတုံးခဲ့တဲ့ မေ ရဲ့ အကြောင်းကို မိုမိုလေး ပရိသတ်တွေ အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မေ ကို ပရိသတ်တွေ က အဆိုတော် တစ်ဦးအနေနဲ့ ပိုပြီး အားပေးကြတာတွေ့ရပါတယ်။ သူမက သီချင်းဟောင်းလေးတွေ ကို Cover ပြန်ဆိုလေ့ရှိပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုများစွာကို လည်း လက်ခံရရှိနေတာပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မေက သူမရဲ့ သီချင်းသစ် တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Goodbye သီချင်း MV အတွက် သူမရဲ့ ဆံပင်အရှည်တွေကို စွန့်လွတ်ပြီးကတုံး တုံးခဲ့တာပါ။
မေ က “GOODBYE”2019 ရဲ့ လတစ်ချို့ကို “Depression” ဆိုတဲ့အရာနဲ့ ကျွန်မ ဖြတ်သန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်. ဒီ video လေးက အဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ခံစားမှုအရဖြစ်လာတဲ့ video လေးပေါ့နော်. 2019, May လမှာရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ. ဒီသီချင်းထဲကနေ ကျွန်မ နှုတ်ဆက်ချင်တဲ့အရာတွေကတော့ တစ်ချို့အတိတ်တွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ struggle တွေ ပြန်မရောက်ချင်တော့တဲ့အချိန်တွေပါ..
ဒီ video ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျမအတွက် အရမ်း emotional ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ခြုံပြောရရင်တော့ “ဝမ်းနည်းခြင်း”ပေါ့ ဒါပေမယ့် ဒီ video ဒီသီချင်းအတွက်လည်း ကျွန်မ အရမ်းကျေနပ်ပါတယ်.. သီချင်းအတွက်ရော video အတွက်ပါ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြတဲ့ အယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..အားလုံးပဲ ဒီ MV လေးကို ကြည့်ရင်း ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.. Pls Like and share နော်
” ဆိုပြီး ပြောထားပါသေးတယ်။
သူမရဲ့ တကယ်အဖြစ်အပျက် ကို အခြေခံထားတဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ခုလို ရိုက်ကူးဖြစ်တာလို့သိရပါတယ်။
အဆိုတော် မေရဲ့ ရိုက်ကွင်း ပုံရိပ်လေး
အဆိုတော် မေ ရဲ့ ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေ တွေ့မြင်ရလို့ ကျေနပ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရှု့ပေးကြတဲ့ မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
အဆိုတျော သရုပျဆောငျ မျောဒယျ မလေး မေ ကို ပရိသတျတှေ သိလောကျမယျ ထငျပါတယျ။ သူမက အဆိုတျော တဈဦးအနနေဲ့ အနုပညာလောကထဲဝငျရောကျလာသူ ဖွဈပွီး မျောဒယျလျ တဈသီးအဖွဈရပျတညျလာပွီး သူမသရုပျဆောငျ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ဇာတျကားမြားစှာလညျး ရှိပါတယျ။ လှပပွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ သူမ က ခုဆိုရငျ ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးဆိုလညျးမမှားပါဘူး ။ ဒီတဈခါမှာတော့ မိုမိုလေး ရဲ့ ခဈြပရိသတျတှေ အတှကျ MV တဈပုဒျရိုကျဖို့အတှကျ ဆံပငျအရှညျတှကေို စှနျ့လှတျပွီး ကတုံးတုံးခဲ့တဲ့ မေ ရဲ့ အကွောငျးကို မိုမိုလေး ပရိသတျတှေ အတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
မေ ကို ပရိသတျတှေ က အဆိုတျော တဈဦးအနနေဲ့ ပိုပွီး အားပေးကွတာတှရေ့ပါတယျ။ သူမက သီခငျြးဟောငျးလေးတှေ ကို Cover ပွနျဆိုလရှေိ့ပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုမြားစှာကို လညျး လကျခံရရှိနတောပါ။ ဒီတဈခါမှာတော့ မကေ သူမရဲ့ သီခငျြးသဈ တဈပုဒျဖွဈတဲ့ Goodbye သီခငျြး MV အတှကျ သူမရဲ့ ဆံပငျအရှညျတှကေို စှနျ့လှတျပွီးကတုံး တုံးခဲ့တာပါ။
မေ က “GOODBYE”2019 ရဲ့ လတဈခြို့ကို “Depression” ဆိုတဲ့အရာနဲ့ ကြှနျမ ဖွတျသနျးဖွဈခဲ့ပါတယျ. ဒီ video လေးက အဲ့ခြိနျမှာဖွဈပျေါခဲ့တဲ့ ခံစားမှုအရဖွဈလာတဲ့ video လေးပေါ့နျော. 2019, May လမှာရိုကျဖွဈခဲ့တာပါ. ဒီသီခငျြးထဲကနေ ကြှနျမ နှုတျဆကျခငျြတဲ့အရာတှကေတော့ တဈခြို့အတိတျတှေ ဖွတျသနျးခဲ့ဖူးတဲ့ struggle တှေ ပွနျမရောကျခငျြတော့တဲ့အခြိနျတှပေါ..
ဒီ video ရိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ကမြအတှကျ အရမျး emotional ဖွဈခဲ့ပါတယျ ခွုံပွောရရငျတော့ “ဝမျးနညျးခွငျး”ပေါ့ ဒါပမေယျ့ ဒီ video ဒီသီခငျြးအတှကျလညျး ကြှနျမ အရမျးကနြေပျပါတယျ.. သီခငျြးအတှကျရော video အတှကျပါ ဝိုငျးဝနျးကူညီပေးကွတဲ့ အယောကျခငျြးစီတိုငျးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ..အားလုံးပဲ ဒီ MV လေးကို ကွညျ့ရငျး ကနြေပျကွလိမျ့မယျလို့မြှျောလငျ့ပါတယျ.. Pls Like and share နျော
” ဆိုပွီး ပွောထားပါသေးတယျ။
သူမရဲ့ တကယျအဖွဈအပကျြ ကို အခွခေံထားတဲ့ သီခငျြးလေးဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ ခုလို ရိုကျကူးဖွဈတာလို့သိရပါတယျ။
အဆိုတျော မရေဲ့ ရိုကျကှငျး ပုံရိပျလေး
အဆိုတျော မေ ရဲ့ ရိုကျကှငျးပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှေ တှမွေ့ငျရလို့ ကနြေပျလိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။ ကွညျ့ရှု့ပေးကွတဲ့ မိုမိုလေးပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျနျော။